Momba anay - Yantai Jietong Water Treatment Technology Co., Ltd.
Yantai Jietong Water Treatment Technology Co., Ltd.manam-pahaizana manokana amin'ny fikarakarana rano amin'ny indostrialy, fanesorana ny ranomasina, rafitra klôlôlisaly electrolysis, ary toeram-pitsaboana fanadiovana ny maloto, dia matihanina amin'ny teknolojia avo lenta ho an'ny fikarakarana rano, fikarohana, fampandrosoana, famokarana ary varotra. Nahazo famoronana sy patanty mihoatra ny 20 izahay, ary nahatratra ny fankatoavana ny rafitra fitantanana kalitao ISO9001-2015, ny rafitra fitantanana ny tontolo iainana ISO14001-2015 fenitra sy ny rafitra fitantanana ny fahasalamana sy ny fiarovana ny asa aman-draharaha OHSAS18001-2007.
Manaraka ny tanjon'ny "Siansa sy teknolojia ho mpitari-dalana, kalitao ho an'ny velona, ​​Credit for Development", namolavola andiam-panafody 90 karazana karazana fitsaboana rano, ny sasany amin'izy ireo dia nofidina ho vokatra natolotry ny PetroChina, SINOPEC ary CAMC. Nanolotra rafitra elektrolisisma marobe izahay ho fisorohana ny harafesin'ny ranomasina ho an'ny famokarana herinaratra any Kiobà sy Oman, ary Nanolotra milina rano madio madio avy any amin'ny ranomasina ho an'i Oman, izay nahatratra ny tombam-bidin'ny mpanjifanay ny vidiny sy ny kalitaon'ny fifaninanana. Natondrana eran'izao tontolo izao ny tetikasanay momba ny rano, toa an'i Korea, Iraq, Saudi Arabia, Kazakhstan, Nigeria, Chad, Suriname, Okraina, India, Eritrea ary firenena hafa.
Tantaran'ny fampandrosoana ny orinasa
Fahaizan'ny famolavolana departemanta teknika
Hatramin'ny 2011, ny orinasa dia nanangana tanteraka ny rindrambaiko famolavolana nomerika 3D an'ny Sliodworks. Ny famolavolana vahaolana maodely 3D an'ny SOLIDWORKS dia afaka mamorona, mamorona, manamarina, mifampiresaka ary mitantana hevi-baovao ary manova ny hevitra vaovao ho famolavolana vokatra tena tsara. Alohan'ny famokarana vokatra, amin'ny alàlan'ny fitsapana ireo vokatra amin'ny tontolo virtoaly, ny injeniera dia afaka manombatombana amin'ny fomba mahomby ny fanatsarana ny kalitao ary manafaingana ny fanavaozana ny vokatra.
Amin'ny alàlan'ny maodely 3D, mifampiresaha tsara kokoa amin'ny mpanjifa ny vokatra, mamaly haingana ny filan'ny mpanjifa, ary mifanakalo hevitra sy hevitra momba ny vokatra amin'ny mpanjifa. Ampiasao ny angona famolavolana 3D hivarotana vokatra vaovao miaraka amin'ny alàlan'ny fandikana tena zava-misy sy ny atiny AR sy VR mendri-piderana, omena ny angon-drakitra vokatra 3D mba hiantohana ny famokarana marina ireo antontan-taratasy fanaraha-maso, boky torolàlana ho an'ny mpampiasa avo lenta ary antontan-taratasy atrikasa. Ekipa mpamolavola tena tsara mifantoka amin'ny fanomezana vahaolana ankapobeny ho an'ireo mpampiasa fitsaboana rano manerantany.
Sivana fanadiovan-drano Ro Well, Fomba fizotran-tany Ro, Ro faritra sivana amin'ny rano, Rafitra fanivanana rano matihanina, Ranomasina mankany amin'ny masinina fisotro rano, Sodium Hypochlorite System Design,